လက်ပံတောင်းတောင် သံဃာတော်များ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရမှု တစ်နှစ်ပြည့်သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရ က် နေ့ တွင် လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းကို ရုပ်သိမ်းပေးရေး အတွက် ဒေါ်နော်အုန်းလှ အပါအ ဝင် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အဖွဲ့ဝင်များက တရုတ်နိုင်ငံအလံ မီးရှို့ဆန္ဒထုတ်ဖော် မှု ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။
ယင်းဆန္ဒပြသူများမှာ ဆူးလေ ဘုရားအနီးမှ စတင်ကာ တရုတ်သံရုံးအထိ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ပြီး နောက် တရုတ်သံရုံးနား အရောက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ အလံကို မီးရှို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မီးရှို့ဆန္ဒပြလိုက်တယ်ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံက ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ရုပ်သိမ်းစေချင် လို့ပါ” ဟု ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုအဖွဲ့ဝင် ဦးစည်သူက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အများပြည်သူ သဘောဆန္ဒမရှိသော လု ပ်ရပ်မှန်သမျှ ချက်ချင်းရပ်ရေး၊ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းကို အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်းရေးနှင့် ရဟန်းပြည်သူများ ကို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းသူနှင့် အမိန့်ပေး ခိုင်းစေသူများကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးရေးတို့ကို တောင်းဆို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သည့် တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများက ဆိုသည်။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူများ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့် ရှိသော်လည်း တခြားနိုင်ငံ အလံများကို မီးရှို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းသည် မိမိနိုင်ငံ၏ ပုံရိပ်ကို ကျဆင်းစေကြောင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ် စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ပြောကြားသည်။
“သူများနိုင်ငံ အလံကို မီးရှို့ရလောက်အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်တာကတော့ နောက်ကွယ်က နိုင်ငံရေး ပိုင်းတွေ အများကြီး ဆက်နွှယ်မှု ရှိလာနိုင်တယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာ တရုတ်သံရုံးရှေ့ရှိ အလုံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးကို မေးမြန်းသော်လည်း မီဒီယာများကို ရှင်းပြရန် အချိန်မရှိသေးကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြား သ ည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ တူးဖော်ရေး စီမံကိန်းကို တပ်မတော် အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အ တွင်း တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီနှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် သပိတ်စခန်းများ ဖွင့်လှစ်မှုများကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ အင်အားသုံး နှိမ်နင်းမှုကြောင့် သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအတွက် တရားဝင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း မရှိကြောင်း ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အဖွဲ့ဝင်များက ပြောကြားသည်။
at 11/30/2013 11:24:00 AM No comments:
at 11/30/2013 11:01:00 AM No comments:
at 11/30/2013 10:44:00 AM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ၌ ယနေ့(နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်) ပြုလုပ် မည့် "တည်ငြိမ်အေးချမ်းသည့် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးတွင် လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်း ကဏ္ဍ" ဆွေးနွေးပွဲတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ထိုသို့ ပြည် သူလူ ထု သို့ မိန့်ခွန်းပြောကြားမှုသည် (၄၃) ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း အစိုးရနှင့် လူထုအခြေပြု အ ဖွဲ့အစည်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရ သ ည်။
at 11/30/2013 10:26:00 AM No comments:
at 11/29/2013 04:08:00 PM No comments:
at 11/29/2013 01:44:00 PM No comments:
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှ ဦးဝီရသူသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်လာမည့် သမ္မတသစ် ရာထူးကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဖြစ်သင့်ကြောင်း တရားဟောနေ သည်ဟု သတင်းများပေါ်ထွက်နေသောကြောင့် ဧရာဝတီက တိုက်ရိုက်စုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့ပါသည်။
“ဦးဇင်းဟောတာက စောင့်လေမျိုးနွယ်နဲ့ ပက်သက်ပြီးပဲ ဟောတာပါ။ ဒေါ်စုရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်သာ တိုင်း ရင်းသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စစ်အစိုးရလက်ထပ်မှာ နိုင်ငံခြားသားကို ယူခဲ့လို့ တိုက်တာကို ခံရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ၅၉ စ ကိုလည်း ပြင်စရာမလိုဘူး” ဟု အရှင်ဝီရသူက ဧရာဝတီသတင်းထောက် စနေလင်းနှင့် တယ်လီဖုန်း ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွင် ဖြေကြားခဲ့သည်။
at 11/29/2013 12:10:00 PM No comments:
နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးကို ထိပါးလာသော လုပ်ရပ်များကို ကာကွယ်ရန် အတွက် အစိုးရအနေနှင့် ထောက်လှ မ်းရေး တပ်ဖွဲ့တစ်ခု ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသင့်ကြောင်း တပ်မတော် ထောက်လှမ်းအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်က ပြောကြားသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ကရဝိက်နန်းတော်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော မြတ်ခိုင် ရေးသား သည့် ဦးခင်ညွန့်နှင့် အင်တာဗျုးစာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားအပြီး သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ၎င်းက ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
at 11/29/2013 11:06:00 AM No comments:
at 11/29/2013 10:21:00 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာ သမ္မတ ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင် တိုင်းပြည် ငါးပါးမှောက်လိမ့်မယ်လို့ မန္တလေး မစိုး ရိမ် တိုက်သစ်က ဦးဝီရသူက ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီအပြင် ဦးဝီရသူပြောတာက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် သာ ပြန်ပြီး သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရင် သူက ထောက်ခံ မှာ ဖြစ်ပြီး တကယ် လို့ ဦးသိန်းစိန်က ဆက်ပြီး အရွေးမခံတော့ဘူးဆိုရင်တော့ သူရ ဦးရွှေမန်း ကိုထော က်ခံ မှာဖြစ်တယ်လို့ ဧရာဝတီကိုပြောပါသေးတယ်။
at 11/29/2013 09:08:00 AM No comments:
at 11/28/2013 11:49:00 AM No comments:
at 11/28/2013 10:58:00 AM No comments:
မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာရှစ်ပါးကို ရဲဝံ့စွန့်စား ဆုတံဆိပ် ကပ်လှူ
လက်ပံတောင်းဒေသရှိ မီးလောင်ဒဏ်ရာရ သံဃာရှစ်ပါးကို ဗုဒ္ဓင်္ကုရဆုတံဆိပ်ပေးခြင်းနှင့် ၀တ္ထုငွေပေး လှူ ပွဲအခမ်းအနားကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ ၀က်မှေးကျေးရွာဟောင်းရှိ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ဗုဒ္ဓင်္ကုရဆိုတာ ရဲဝံ့ခြင်း၊ စွန့်စားခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်းတို့၏ ပေါင်းဆုံရာ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံကြသူများကို ကို ယ်စားပြုသည့် ဆုတံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု အဆိုပါအခမ်းအနား၌ မန္တလေး မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်က ဆရာေ တ်ာတစ်ပါးဖြစ်သည့် ဥူးဝီရသူက မိန့်ကြားခဲ့သည်။
at 11/28/2013 10:18:00 AM No comments:
သြစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ရောက်ရှိနေသည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်း စု ကြည်က မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဘာသာမတူသည့် အုပ်စုနှစ်စုအကြား ပဋိပက္ခ များ ဖြစ်ေ ပါ် နေမှုအပေါ် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်သည်ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းသုံးနှုန်းခြင်းသည် မုန်းတီးမှုများကို သာ ဖြ စ်စေ မည်ဟု သတိပေးလိုက်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်က ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Sydney Opera House တွင် ကျင်းပသော Ideas At the Hou se ဆွေး နွေးပွဲတွင် စာနယ်ဇင်းသမားများ၏ မေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဖြေကြား သွာြး ခင်းဖြစ် သည်။
at 11/28/2013 10:10:00 AM No comments:
သိမ်းဆည်းမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ရန်ကုန်တိုင်း၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် မိကျောင်းကန် အပိုင်း ၁၊ ၂၊ ၃ ရပ်ကွက်များမှ မူလပိုင်ရှင်များက ဒုတိယနေ့အဖြစ် သပိတ်စခန်း ဆက်လက်ဖွင့်ထားပြီး တောင်းဆိုနေ သည်ဟု ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင်ပါဝင်သူ မနေနွယ်သန်းက နိုဝင်ဘာ ၂၇ တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
သိမ်းဆည်းမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် တိုင်းအစိုးရမှဖြေရှင်းပေးစေလိုသဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းသ င်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ် မိကျောင်းကန်ရပ်ကွက် အပိုင်း ၁၊ ၂ နှင့် ၃ မူလပိုင်ရှင်များက နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ယ င်း နေရာ၌ပင် သပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ် တောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်မှာ ဒုတိယအကြိမ် သပိတ်စ ခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ လာရောက်ညှိနှိုင်းမှုများ မရှိသေးဟုလည်း မနေနွယ်သန်း က ဆို သည်။
at 11/28/2013 09:58:00 AM No comments:
at 11/27/2013 08:23:00 PM No comments:
at 11/27/2013 07:11:00 PM No comments:
at 11/27/2013 07:03:00 PM No comments:
at 11/26/2013 03:00:00 PM No comments:
ယနေ့ မကြာခဏကြားနေရသောစကားမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုသော စကားသာဖြစ်သည်…မှန်ပါသ ည် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိစေရန် များစွာလုပ်ဆောင်ရပါဦးမည်..ဥပဒေသည် လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက် လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်ရမည်..ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ဥပေ ဒ ဖောက်ဖျက်မှုကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ၊ အခြားရေးရာများ ပါဝင်လာခဲ့လျှင် တရား ဥပ ဒေ စိုး မိုးမှု ရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတိုင်းအနေဖြင့် တရား ဥပဒေစိုး မိုးရေး အ တွက် အ မှန်တရားကိုမြတ်နိုးတတ်ရမည်…အမှန်တရားအတွက် သတ္တိရှိရမည် ဖြစ်သည်..
at 11/26/2013 01:11:00 PM No comments:
ကမ္ဘာသိ ကမ္ဘာကျော် ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသလို သယံဇာတ ပစ္စည်းများစွာထွက်ရှိသည့်နိုင်ငံ၊ ရှေ့ဟောင်း ယဉ်ေ ကျးမှုတွေပေါများတဲ့နိုင်ငံ အရှေ့တောင် အာရှနှင့် အာရှ တွင် စီးပွားရေး အရ အချက်အခြာကျသော ပထ၀ီ အခြေအနေ အထား ပိုင်ဆိုင်ထားသော နိုင်ငံ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ထွန်းကား သော နိုင်ငံဆိုပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရပ်တ ည်နေတာ ရှေးယခင် ကတည်းကပါ။ လွတ်လပ်ရေး ကို အင်္ဂလိပ် ဆီကနေ ရပြီး ကိုယ့်ပိုင်ကိုယ့် လူမျိုးနဲ့ ကို ယ်အုပ်ချုပ်လာတာလဲ ၆၅နှစ်ကျော်လို့ ၆၆နှစ်ပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပါ သည်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုး တက်မှု မှာ အရမ်းနှေးကွေးတယ်လို့ ထင်ရပါသည်။ အဖက်ဖက်မှာ အခြားသော နိုင်ငံ များထ က် နောက် ကျ နေ ရပါသည်။ ဘာကြောင့် လဲ??? ဘယ်လိုအတွက်ကြောင့်လဲ ??? ဆိုတာ စဉ်းစားဖို့ လိုနေပါပြီး။
at 11/26/2013 12:33:00 PM No comments:
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံရန် မလိုအပ်ကြော င်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
လွှတ်တော်အတွင်း တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသောကြောင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်တို့ တွေ့ဆုံရန် မလိုအပ်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောဆိုသည်။
at 11/26/2013 11:58:00 AM No comments:
at 11/26/2013 11:53:00 AM No comments:
at 11/26/2013 11:20:00 AM No comments:
at 11/26/2013 10:32:00 AM No comments:
လွှတ်တော်အတွင်း ဖြေဆိုချက်များအတိုင်း ၀န်ကြီးဌာနများက အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိမ ရှိ ကွင်းဆင်းလေ့လာသွားမည်ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများ၊ တာဝ န်ခံ ချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်ဌေးက နိုဝင်ဘာ ၂၅ တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အချို့ဒေသများတွင် အစိုးရ၀န် ကြီး ဌာနများ၏ လုပ်ဆောင်ချက် မှားယွင်းမှုအချို့ကိုလည်း ထောက်ပြသွားသည်။
at 11/26/2013 10:21:00 AM No comments:
NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် UNFC ခေါင်းဆောင်များ ရန်ကုန်မြို့၌ ယနေ့တွေ့ဆုံမည်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UN FC) တို့ ယနေ့ (နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်) တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း UNFC အဖွဲ့ထံမှ သိရသ ည်။
at 11/25/2013 11:19:00 AM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်တို့နှင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအြေ ခခံဥပဒေ ပြုပြ င်ပြောင်း လဲ ရေးဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ မေတ္တာ ရပ်ခံမှုအပေါ် တရားဝင် အကြောင်းကြားစာ မရောက်ရှိသေးသဖြင့် လက်ခံ၊ မခံ မပြောနိုင်သေးဟု သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူ များက နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
at 11/25/2013 11:15:00 AM No comments:
at 11/24/2013 03:45:00 PM No comments:
at 11/24/2013 03:39:00 PM No comments:
at 11/24/2013 03:32:00 PM No comments: